Tansaaniya waxay martigelin doontaa Bandhigga Dalxiiska Bariga Afrika ee Bariga Afrika bisha Oktoobar
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Tansaaniya waxay martigelin doontaa Bandhigga Dalxiiska Bariga Afrika ee Bariga Afrika bisha Oktoobar
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirradu waxay dhammaantood isku raaceen in la sameeyo Bandhigga Dalxiiska Gobolka EAC (EARTE) oo sannadle ah iyada oo ujeedadu tahay hagaajinta muuqaalka gobolka iyo suuqgeynta sidii hal dalxiis.
Dawladaha Bariga Afrika ayaa qabanaya bandhig dalxiis oo weyn bisha Oktoobar ee sannadkan.
Bandhigga koowaad iyo kan weyn ee dalxiiska gobolka ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco Tanzania.
Bandhigga ugu weyn ee dalxiiska gobolka ayaa lagu wadaa inuu soo jiito ka -qaybgalayaasha dalalka xubnaha ka ah Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo Koonfurta Suudaan.
Dalxiiska suuqgeynta oo ah wax soo saarka dhaqaalaha gobolka, dowladaha Bariga Afrika ayaa qaban doona bandhig dalxiis oo weyn bisha Oktoobar ee sannadkan iyada oo la kaashanayo is -dhexgalka gobolka iyo suuqgeynta dalxiiska gobolka.
Bandhigga ugu horreeya iyo kan weyn ee dalxiiska gobolka ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco Tansaaniya, taasoo soo jiidan doonta lixda dowladood ee xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika (EAC) si ay ugu soo bandhigaan meelaha dalxiiskooda ah dalladda isdhexgalka gobolka ee dalxiiska.
Warbixinno ka Bulshada Bariga Afrika Xafiisyada madaxa ee magaalada dalxiiska ee Arusha ee waqooyiga Tansaaniya ayaa sheegay in bandhigga ugu horreeya iyo kan ugu weyn ee dalxiiska gobolka la qorsheeyay Oktoobar si loogu soo jiito ka -qaybgalayaasha dalalka xubnaha ka ah Tansaaniya, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo Koonfurta Suudaan.
Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska Tansaaniya Dr. Damas Ndumbaro ayaa ku dhawaaqay bandhiga dalxiiska ee gobolka intii uu socday kulan dalwad ah oo uu la yeeshay Golaha Wasiirrada Dalxiiska ee Beesha Bariga Afrika (EAC).
Slovakia inay raacdo Awstaria xidhitaanka buuxa ee COVID-19
Ugu yaraan 99 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka Sierra Leone